admin – Page 254 – Shabakadda Amiirnuur
Taliyaha Milatariga DF Iyo Kan Amniga Ee Farmaajo oo Isku Dheggan.
Taliyaha ciidanka Milatariga DF ayaa markii ugu horeysay si kulul uga hadlay warqad ka soo baxday lixdii bishii hore, xafiiska la taliyaha arimaha amniga ee madaxweyne Farmaajo kaasoo lagu magacaabo Cabdisaciid Muuse Cali. Warqadda la taliyaha ee soo baxday Bishii hore oo nuqul kamid ah la gaarsiisay xafiiska Ganaraal C/Wali […]
Dowladda Kenya ayaa xukun ku ridday haweenay Muslimad ah oo saygeedi ay horay ukhaarijiyeen ciidamada Booliska wadankaasi. Maxkamad Kutaal Waddanka Kenya ayaa 10 sano oo xarig ah ku xukuntay Haniyah Saciid oo ah Armaladii uu ka shahiiday Sheekh Cabuudo Roogu oo kamid ahaa culimada xaqqa caddeeya sanaddii 2012. Haweenaydan muslimadda […]
Xukun Dil Ah oo Ka Dhacay Fagaare Ku Yaalla Hiiraan.
Xukun dil ah oo ay usoo daawasho tageen boqollaal dad weyne ah ayaa barqanimadii maanta ka dhacay fagaare weyn oo ku yaalla degmada Buq-aqable ee gobolka Hiiraan. Xukunkan oo ahaa (Xadu-ridda) ayaa waxaa lagu fuliyay askari ka tirsan dowlada federalka oo lagu magacaabi jiray Sahal Axmed Rasle kaasoo ay tababareen […]
Mu’asasada As-sahab oo ah garabka warbaahineed ee Ururka Al Qaacidda ayaa faafisay kalimad maqal ah oo uu jeediyay Dr. Aymen Al Dawaahiri oo ah Amiirka Ururka. Kalimaddan oo muddo 9 daqiiqo ah la dhageysan karo ayuu diiradda ku saarayaa xaaladaha wadanka Masar iyo maamulladii wadanka soo maray sida ay u […]
Dhageyso Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Mowduuc Muhim Ah.
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan. Waa barnaamij lagu lafa guro hadba mowduuca taagan iyadoo laga eegayo muhiimadda uu bulshada u leeyahay. Haddaba maanta waa mowduuc ahmiyad gaar ah leh oo qormooyin laga sameyn karayo islamarkaana ay ku jiraan […]
Degdeg: Ra’iisulwasaaraha Itoobiya oo Is Casilay.
Hailemariam Desalegn oo ahaa R/wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii uu hayay. Isagoo khudbad ka jeedinayay Telefeshinka Qaranka Itoobiya ayuu sheegay in uu istiqaaladiisa udhiibay golaha isku tagga kacdoonka shacbiga Itoobiya si xal loogu helo qulqulatooyinka naafeeyay dhaqaalaha wadanka islamarkaana kala daadiyay qowmiyadaha Itoobiya ka […]
Gaari Dagaal oo Puntland Looga Qarxiyay Bari.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in gaari dagaal oo ay saarnaayeen ciidamada Puntland lagu burburiyay gobolkaasi, iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac noqdeen askartii saarnayd. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gaarigan lala helay qarax culus xilli uu marayay inta u dhaxaysa Sugurre iyo Galgala, waxaana […]
Dhageyso Diiradda Jimcaha oo Lagu Qiimeeyay Sannadka Uu Farmaajo Madaxweynaha Yahay.
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo lagu falanqeeyo hadba qodobki muhim ah oo markaas ku haboon, waxaana maanta lagu lafa guray ama lagu qiimeeyay mudada sannadka ah ee uu Farmaajo madaxweynaha yahay, waxaana nagala qeyb galay mas’uul dowladda ka tirsan, aqoonyahan iyo nabadoon kamid ah indheer garadka Muqdisho. Halkan […]
Waxaa lasoo gaba gabeeyay kulamo dib uheshiisiineed oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaanno katirsan gobollada Hiiraan iyo sh/dhexe. Kulanka oo uu soo qaban qaabiyay Xafiiska dib uheshiisiinta xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa looga arrinsanayay colaadda soo noq noqotay ee u dhaxaysay beelaha walaalaha ah ee Xawaadle iyo Abgaal taas oo […]
Tartankan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa dhax maray odayaasha dhaqanka ee beelaha daga Jubbooyinka, waxaana fagaaraha tartanka ee MacallinAadan Ceyroow ee magaalada Jilib soo xaadiray dadwayne aad u badan oo daawanayay sida uu u socdo tartanku. Waxgaradka beelaha ayaa ku baratamayay shiishka oo ay horay usoo bateen, […]